WAX KA OGOW DOORASHADA TAARIIKHIGA AH EE KA DHACAYSA PUNTLAND | Dayniile.com
Home Warkii WAX KA OGOW DOORASHADA TAARIIKHIGA AH EE KA DHACAYSA PUNTLAND
Puntland ayaa markii ugu horreysay maanta oo Isniin ah qaban doonta doorasho qof iyo cod ah oo lagu dooranayo goleyaasha deegaanka degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ufeyn.
52 sano kadib ayaa dadweynaha degmooyinkaasi u dareeri doonaan in ay codkooda dhiibtaan. Doorashadii Wood Khasaaray ee 1969 ayaa ugu dambaysay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda deegaannada Qardho, Eyl iyo Ufeyn.
Ururada Tartamaya iyo Tirada Musharaxiinta
Doorashada waxaa ku tartamaya goleyaasha deegaanka 8 urur siyaaaadeed oo kala ah, Kaah, Mideeye, Horseed, Caddaalad iyo Sinnaan, Runcad, Mustaqbal, Ifiye iyo Shaqaalaha.
Sidoo kale ilaa 449 musharrax ayaa ku tartamaya 87 kursi oo ah goleyaasha deegaanka saddexda degmo. Qardho waxaa ka soo baxaya 33 kursi, Eyl 27 kursi, halka sidoo kale Ufeyn ay ka soo baxayaan 27 kursi.
Tirada dadka codeynaya
Tirada guud ee dadka lagu wado in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada berri ayaa ah 37,578 qof (Soddon iyo todoba kun, shan boqol todobaatan iyo sideed). Degmada Qardho waxaa codkooda ka dhiiban doona 20,620 qof (Labaatan kun, lix boqol iyo labaatan), degmada Eyl-na waxaa codkooda ka dhiiban doona 8,671 qof (Sideed kun, lix boqol todobaatan iyo kow), halka Ufeyn ay codkooda ka dhiiban doonaan 8,287 qof (Sideed kun, labo boqol sideetan iyo todoba).
Tirada koobka guud ee dadka degmada Qardho ayaa Wasaarada Qorsheynta Punttland ku sheegtay 181,039 qof, halka degmada Eyl lagu qiyaasay 148,611 qof, sidoo kale Ufeyn waxaa lagu sheegay 57,095 qof..
Guud ahaan saddexda degmo waxaa laga codeyn doonaa 54 goobood (Seejo). Degmada Qardho waxaa laga codeyn doonaa 25 goobood, degmada Eyl 18 goobood, halka Ufeyn laga codeyn doono 11 goobood.
Amaanka Puntland ayaa aad loo adkeeyay, waxaana la hakiyay isu socodka gaadiidka qaar ka mid ah gobolada Puntland, sidoo kale waxaa la fasaxay qaar kamid ah goobaha waxbarashada Puntland.
54 goobood ee laga codeyn doono ayaa lagu diyaariyay qalabkii doorashada, waxaana gaaray shaqaalaha Guddiga Doorashada, goobjoogayaal iyo ciidamo gaar ah oo amaanka sugi doona.
Ururka siyaasadda Puntland ayaa iyaguna aad ugu diyaar-garoobay doorashada, waxayna maalmihii la soo dhaafay soo gabagabeeyay ololahooda doorashada oo mid walba uu soo bandhigay wixii uu ku kasban lahaa codka dadweynaha.
Puntland kama jirto Maxkamad Dastuuri ah, sidaas darteed waxaa dad badani isweydiinayaan sida loo xalinayo hadii khilaaf ama cabashooyin ka yimaaadaan doorashan oo ku cusub Puntland.
Xukuumadda Madaxweyne Deni oo ku dhiiratay in ay Puntland ka hirgeliso doorasho qof iyo cod ah ayaa hadana ka warwareegta dhisitaanka Maxkamad Dastuuri ah.
Madaxweyne Deni ayaa aaminsan in Maxkamadda Sare ay qaban karto shaqada Maxkamadda Dastuuriga ah, sida uu ku yiri hadal uu horey u jeediyay, balse fikirkaas mid ka duwan waxaa qaba Guddoomiyaha Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Guuleed Saalax Barre oo isagu aaminsan in aysan jirin cid qaban karta shaqada Maxkamadda Dastuuriga ah.
Previous articleDagaalkii Ugu Cuslaa Oo Ka Dhacay Guriceel Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Xaaladda
Next articleXisbiga Waddani oo cambaareeyay amarka xukuumada Somaliland ku dhintay safarada shirkadaha diyaaradaha qaarkood
Gabadha Soomaaliyeed ee Ikraam Tahliil Faarax, waxa ay aheyd sarkaalad ka tirsaneyd hay’ada sirdoonka qaranka ee NISA, waxaana ay baratay kuna shaqeynaysay cilmiga Cyber...
MADAXWEYNE SICIID DENI OO SAFAR SIYAASADEED UGU BAXAYA DALKA DIBADDIISA
Qaraxyo ka dhacay dalka Afqanistaan oo ay ku dhinteen ku dhawaad...